Neymar Jr Oo Wacad Ku Maray In PSG Uu Usoo Saari Doono Finalka Champions League.
HomeWararka Ciyaaraha MaantaNeymar Jr oo wacad ku maray in PSG uu usoo saari doono Finalka champions league.
Xidiga wadanka brazil iyo kooxda PSG Neymar Jr wuxuu wacad ku maray inuu sameyn doono wax walba oo uu kari karo si uu u hubiyo in Paris Saint-Germain ay gaarto finalka labaad ee Champions League oo isku xigta.
Kooxda Mauricio Pochettino ayaa 2-1 qasaaro ah kala kulantay lugtii hore ee ay la ciyaareen Manchester City waxaana ay caawa booqan doonaan garoonka Etihad Stadium iyagoo u baahan in wax weyn oo soo Laabasho ah sameeyaan.
Kylian Mbappe ayaa shaki ku jira lugta labaad, laakiin Neymar waa taam oo diyaar ayuu u yahay inuu saameyn ku yeesho ciyaarta Manchester city sidoo kale Neymar ayaa yiri: Waxaan ciyaar aad u adag la ciyaareynaa Manchester City, laakiin waa inaan rumeysanaa, anaga oo aan ka fakarin waxa tirakoobka uu ka sheegayo fursadaha aan ku guuleysan karno.
Qof walba oo reer Paris ah waa inuu rumeeyaa annagana waxaan ahay kan ugu horreeya Waxaan safka hore kaga jiraa. Anigu waxaan ahay dagaalyahankii ugu horreeyay ee dagaalkan Waxaan sameyn doonaa inta karaankeyga ah waxaanan sameyn doonaa wax walba oo suurtagal ah si aan ugu gudbo finalka, xitaa haddii ay la micno tahay inaan ku dhinto garoonka.